एमएएफ स्टाफ स्पटलाइट: डोरिस भस्केज
Samhita Collur मा जुन 6, 2019 द्वारा लिखित।
डोरिस भास्कीज, एमएएफको ग्राहक सफलता प्रबन्धकलाई भेट्नुहोस्। जे होस् उनी आफैंले यो कहिल्यै स्वीकार गर्दिनन्, डोरिसले यसको अर्थ के हो भन्ने मूर्तरूपमा लिन्छिन् समुदाय नेता। एमएएफको क्लाइन्ट सक्सेस म्यानेजरको रूपमा, डोरिस समुदायको साथ हरेक दिन संलग्न भइरहेको छ - एमएएफ़को कार्यक्रमहरूमा ग्राहक भर्ना गर्दै, मासिक १ टीटी T टी ढाँचालाई सहजीकरण गर्दै, उनीहरूको यात्राभर सहभागीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँछ, र सहभागीहरूलाई उनीहरूको परिस्थिति र आवश्यकताहरूको लागि उत्तम स्रोतहरूसँग जोड्दै। उनको एमएएफमा नौ बर्षको अवधिमा, उनले जहिले पनि समुदायलाई उनको कामको केन्द्रमा राख्छिन्। उनको अविश्वसनीय कार्यको सम्मानमा, हामीले उनलाई उनको अनुभवमा केही प्रतिबिम्बाहरू बाँड्न आग्रह गर्यौं:
तपाईले पहिलो पटक MAF को बारेमा कसरी सिक्नुभयो?
डीभी: एक दिन, म सान्चेज एलिमेन्टरी स्कूलमा स्कूल काउन्सिलको बैठकमा उपस्थित भएको थिए र प्रिन्सिपलले कुरा गरिरहँदा, मैले सम्झौतामा हप्काउँदा र उसले जे भने पनि असहमति जनाउँदै मेरो टाउको हल्लाउँदै बीचतिर गएको मैले पाएँ। अचानक, कसैले मेरो काँधमा टेप गरी्यो र भन्यो, 'तपाईंले बोल्नु पर्छ र केही भन्नु पर्छ यदि तपाईं असहमत हुनुहुन्छ भने।' उनीले भन्न सक्छिन् कि मेरो जिब्रोको छेउमा केहि छ, तर म बोल्न हिचकिचाइरहेको थिएँ। थोरै मलाई थाहा थियो कि यो व्यक्ति त्यस्तो व्यक्ति हुन जाँदैछ जसले मलाई जीवनमा साँच्चै अविश्वसनीय अवसरहरूको एक धेरै गर्न डोर्यायो। यो घटना पछि, म स्कूल समूहहरू (PTA, SSC, ELAC) को साथ बढी संलग्न हुन थाले। कामको लागि मसँग अहिले सम्म पर्याप्त अवलोकन थिएन, तर मलाई थाहा थियो कि म आफ्ना बच्चाहरूको जीवनमा भिन्नता ल्याउन चाहन्छु। चाँडै नै, ती महिला जसले मलाई स्कूल काउन्सिलको बैठकमा बोल्न प्रोत्साहित गरेका थिए - लोरेना - मलाई एक आयोजक र नेता हुन प्रशिक्षण दिँदै थिए। बिस्तारै मैले सान फ्रान्सिस्को आयोजक परियोजना (एसएफओपी) सँग बढी समय स्वयंसेवा गर्न थाले, सान फ्रान्सिस्कोमा आधारित नाफामुखी, र लोरेना पनि उनीहरूसँगै काम गरिरहेका थिए। म अधिक प्रशिक्षण र र्‍यालीहरूमा भाग लिने क्रममा मैले बिस्तारै प्रणाली पछाडि बुझ्न थालें आयोजन। अन्ततः, लोरेनाले एमएएफमा काम गर्न थाल्छिन्, र जब स्थिति खोलियो, उनले मलाई यसको बारेमा बताइदिए र मैले आवेदन दिने निर्णय गरें।
यो काम गर्न तपाईंलाई कुन कुराले उत्प्रेरित गर्छ?
डीभी: मेरो परिवारले मलाई प्रेरणा दिन्छ। एक आप्रवासीको रूपमा, मलाई थाहा छ कि नयाँ देश आउने संघर्ष हो र यस नयाँ देशले के अवसर दिन्छ भनेर थाहा पाउँदैन। जब मेरो बुबा एल साल्भाडोरबाट अमेरिका सर्नुभयो, मैले हप्तासम्म मेरो बुवाबाट सुनेन। मलाई थाहा थियो कि ऊ अर्कै देशमा गएको थियो, तर मलाई थाहा भएन कि त्यहाँ अध्यागमन स्थिति संलग्न छ। मेरो बुबाले अन्ततः हामीलाई अमेरिका आउन पठाउनुभयो, र सुरुमा म यहाँ अमेरिका जान चाहन्नथे। एल साल्भाडोरमा मलाई बच्चा हुन अझ बढी स्वतन्त्रता महसुस भयो र मलाई मेरो परिवारको समर्थन पनि थियो। म सधैं मेरो नजिकै थिए अबुएलिटोस। जब म अमेरिकामा सरेँ, मैले नयाँ भाषा सिक्नुपर्‍यो र नयाँ स्कूल प्रणालीमा नेभिगेट गर्नुपर्‍यो। थप रूपमा, मेरो परिवार उनीहरूको आफ्नै आर्थिक संघर्षको सेटबाट गुज्रिरहेको थियो। मेरो बुबा एक्लोमा काम गरिरहनुभएको थियो, र कहिलेकाँही, हामीसँग खानेको लागि खाना थिएन। मलाई मेरो आमाको सम्झना छ र म स्थानीय टिभी डिनर किन्नको लागि जाँदैछु वा खाना बैंकमा लाइनमा उभिएर। जे होस् मेरा बाबुआमा जहिले हाम्रो परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्षम थिए, हामी निश्चित रूपमा आर्थिक संघर्ष गरिरहेका थियौं। तैपनि, मेरा आमाबुवाले कहिले पनि मलाई वित्त प्रबन्ध गर्न वा यसको debtणमा हुनुको मतलबको बारेमा कहिले कुरा गर्नुहुन्न। एक स्वतन्त्र वयस्कको रूपमा, र विशेष गरी म आमा बन्ने बित्तिकै मैले आफ्नै आर्थिक संघर्षहरूको अनुभव गरे। जब मैले पहिलो पटक MAF मा काम गर्न सुरु गरें, मेरो पूर्व सहयोगी एलेक्स त्यसबेला MAF को वित्तीय कोच थिए। उसले मलाई मेरो manageण कसरी प्रबन्ध गर्ने र यसलाई तिर्ने बारेमा मार्गदर्शन गर्न सुरु गर्यो। म उनीसँग हुने वित्तीय कक्षा र कार्यशालाहरूमा भाग लिने थिएँ, र मैले वित्तीय व्यवस्थापनको बारेमा बढी सिक्न थाल्दा यो विषय मेरोलागि अत्यन्त चाखलाग्दो भयो। वित्तीय प्रबन्धन हाम्रो दैनिक जीवनको एक ठूलो हिस्सा हो। बिस्तारै, म debtण बाट बाहिर पनि जान्न सक्षम भएँ।
अक्सर, जब म हाम्रा ग्राहकहरू कुल debtणमा रहेको कुराको बारेमा सुन्दछु, उनीहरूको परिवारलाई घर फिर्ता समर्थन गर्न संघर्ष गर्दै, ती कथाहरू मेरो हिस्सा हुन थाल्छन् र म आफ्नै अनुभवहरूमा फर्केर सोच्दछु। म हाम्रो समुदायलाई वित्तीय प्रणालीको हिस्सा बन्न सहयोग गरेर फर्काउन कडा आवश्यकता महसुस गर्दछु।
दिनुहुन्छ कि एमएएफको काम 'भरोसा' मा निहित छ, तपाईंले कसरी समुदायसँग विश्वास निर्माण गर्नुभयो?
डीभी: मलाई लाग्छ मैले ढोकाबाट हिँड्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई सुन्न समय दिएँ र ती ठाउँहरू खोल्नको लागि र समय खोलेर मैले विश्वास निर्माण गरें। सुरूमा, म पनि संलग्न हुन डराएँ किनभने म स्वाभाविक रूपमा धेरै समानुभूतिशील र भावनात्मक व्यक्ति हुँ। त्यहाँ कहिलेकाहीं ग्राहकहरु मेरो दिमागमा दिनहरु, हप्ताहरु, महिनाहरु, र कहिलेकाँही, सालहरु को लागी आएको छ। तर यदि म कामको साथ बमबारी हुँदो रहे पनि, यदि एक ग्राहक भित्र जान्छ र म तिनीहरू केहि कुरा गर्न चाहान्छु भने, मेरो समय उनीहरूलाई दिइन्छ। कहिलेकाँही हामीलाई सुन्न कोही चाहिन्छ। धेरै जसो समय, म के गर्न समाप्त हुँ भनेर। त्यहाँ केही ग्राहकहरू छन् जुन मैले २०० since पछि काम गरें, र मलाई उनीहरूले उनीहरूको परिवारको हिस्सा बनाएको जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ कि म धेरै भाग्यशाली ग्राहकहरु पाएको छु जुन धेरै सोचविचार गरी रहेका छन् - ग्राहकहरु जसले मेरो बारेमा सोच्दछन् पनि उनीहरूले नगर्नु पर्छ। धेरै बर्षहरूमा, म प्रत्येक व्यक्तिको साथ एक बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्षम भएको छु जुन MAF को ढोकाबाट हिँड्दछ।
बितेको नौ बर्षमा तपाईको कामको तरीकाले कसरी विकसित भएको छ?
डीभी: मेरो सबै जीवन, मलाई थाहा छ कि म काम र मानिसहरूलाई भेट्न मन पराउँछु। जब मैले पहिलो पटक MAF मा काम गर्न सुरु गरें, समुदायसँग काम गर्ने मलाई एकदम थोरै औपचारिक अनुभव थियो। मेरो धेरै भन्दा पहिलेको अनुभव मैले स्कूल जिल्लाहरुमा गर्ने आयोजना कार्यमा सम्मिलित थियो। जब मैले MAF मा काम गर्न सुरु गरें, मलाई थाहा थिएन कि यस कामलाई के चाहिन्छ। सुरुमा मैले महसुस गरिन कि म मेरो १००१टी ११ टी दिँदैछु किनकि मलाई लाग्थ्यो कि क्लाइन्ट्सले सोधिरहेका प्रश्नहरूका उत्तरहरू मसँग छैन। समुदायलाई प्रभाव पार्ने मुद्दाहरू बुझ्न र म कसरी तिनीहरूलाई सही संसाधनहरूमा रेफर गर्न सक्छु भनेर बुझ्नको लागि यसले स्वतन्त्र अनुसन्धानको धेरै लिनुभयो। मलाई सान्दर्भिक थिएन कि सान फ्रान्सिस्कोमा गैर-नाफामुखी संस्थाको त्यस्तो बलियो इकोसिस्टम छ। धेरै बर्षहरूमा मैले यी संगठनहरू चिन्ने र मेरो ज्ञान र मेरो साथ सम्बन्धहरू निर्माण गर्ने बुँदा बनाएको छु कम्परोरोस एन ला लुचा विभिन्न संसाधनहरूको लागि ग्राहकहरूलाई कहाँ सन्दर्भ गर्ने।
यद्यपि म यो क्षण कसैलाई सहयोग गर्न सक्दिन, मलाई लाग्छ कि सबैलाई आदरपूर्वक व्यवहार गर्नु, उनीहरूलाई अर्को स्रोतमा निर्देशित गर्न कोशिस गर्नु, र म जे सहयोग गर्न सक्छु प्रस्ताव गर्दछ।
दिइएको छ कि तपाईं युवासँग काम गर्न थाल्नुभयो र K-12 शिक्षा स्थानमा आयोजन गर्न, युवाहरूलाई तपाईंको सल्लाह के हो?
मेरो लागि, व्यक्तिगत रूपमा, मेरो सल्लाहकार लोरेनाले ममा एक सम्भाव्यता देखे जुन मैले आफैंमा देखिन। यसको कारणले गर्दा म जहिले पनि मँइएफको ढोकामा हिंड्ने सबैमा अविश्वसनीय सम्भाव्यता देख्ने बिन्दु बनाउँछु। म सबैलाई जान्न चाहन्छु कि तिनीहरू एक कारणको लागि यस पृथ्वीमा छन्। हुनसक्छ यो कारण अहिले स्पष्ट छैन, तर कहिलेकाँही तपाईले बुझ्नुहुनेछ कि तपाईं यहाँ किन हुनुहुन्छ र तपाईंले यसको के बनाउनु पर्छ। यसैले तपाईं कहिले पनि हार मान्न सक्नुहुन्न।